Ara-dalàna ve ny misintona Bulli Bai Apk? [Sulli Deals] - Mpilalao Luso
Na dia efa fantatry ny mpampiasa smartphone aza ny Sulli Deals. Raha tsy izany dia aza manahy fa eto no hanazavana fohifohy ny antsipiriany. Tahaka ny fifanarahana teo aloha, nahatezitra ny olona ity tantara ratsy ity. Raha vonona ny hijery sy hahatakatra ity sehatra vaovao ity ianao dia apetraho Bulli Bai Apk.
Nikasa ny hankafy ity taom-baovao ity amin’ny fifaliana sy fifaliana vaovao ny olona. Tezitra anefa ny olona rehefa nandre izany fampiharana vaovao izany. Nanafintohina ny fitondram-panjakana iray manontolo izany rehefa nahazo ireny fitarainana ireny.
Hatramin'izao fotoana izao dia niteraka tatitra an-tserasera mampiady hevitra samihafa ny vaovao. Io fitakiana io dia mampifandray ny governemanta amin'ny olana lehibe. Na izany aza, toa mandray fepetra hentitra amin'ny fampiharana ny governemanta. Raha te hijery fohifohy ny endri-javatra fampiharana, alaivo eto ny App Bulli Bai.
Inona ny Bulli Bai Apk
Bulli Bai Apk dia sehatra mifandraika amin'ny olon-dehibe amin'ny Internet izay nandefasan'ny sarin'olona malaza samihafa. Anisan'izany ny mpanao gazety, ny mpikatroka ara-tsosialy, ny mpianatra ary ny olona hafa mifandray. Na ny mpampiasa aza dia milaza fa ny mpamorona dia mampakatra sary ho an'ny lavanty.
Rehefa avy nikaroka lalindalina kokoa sy nanangona vaovao avy amina loharano samihafa. Androany eto dia nahomby izahay tamin'ny fanomezana vaovao azo angonina. Izany dia hitarika ireo mpampiasa smartphone hahatakatra ireo olana lehibe mifandraika amin'ny fampiharana.
Ary eto isika dia hiresaka momba ny olana lehibe. Izay nanenika tanteraka an'io fahatezerana lehibe io teo amin'ny olona niteraka fahavoazana manokana. Na dia tsy azonay antoka aza hoe inona no tena kasain'ny governemantan'i India hatao amin'izany.
Na izany aza, ny minisitry ny informatika sy ny andrim-panjakana tompon'andraikitra hafa dia efa nandray an'io olana mirehitra io. Fanambarana samihafa navoakan'ny manampahefana momba ny fandraràna an'i Sulli Bai sy Bulli Bai. Taorian'ny nahazoana ity valinteny mahery vaika avy amin'ny vahoaka ity.
Volana vitsivitsy lasa izay dia nahatezitra ny olona tamin'ny fanaovana lavanty ny vehivavy silamo sy ny sarin'izy ireo ihany koa io resabe io. Na izany aza, ny governemanta dia milaza fa manohitra mafy ny olana ary mamaha ity asa mahamenatra ity ara-potoana. Taorian'ny volana vitsivitsy, izao olana vaovao izao dia nitsidika ny lohany.
Ny foto-kevitr'ity fampiharana vaovao ity dia nitovy tanteraka tamin'ny sehatra teo aloha. Na dia nanao lavanty ihany aza ny mpamorona sary amidy. Saingy ny mpampiasa dia milaza fa ny vehivavy samy hafa dia napetraka ao amin'ny lisitry ny lavanty.
Rehefa avy nandinika ny tatitra azo tratrarina sy ny hevitry ny manam-pahaizana samihafa. Ny sehatra dia manohana ny fanaovana lavanty sary manokana tsy misy fankatoavana. Izay heverina ho tsy ara-dalàna ary mitaky ny rariny haingana ny olona.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra, ny Bulli Bai App Github dia natomboka voalohany tamin'ny 1 Janoary 2022. Izay noheverina ho taom-baovao mahafaly. Amin'ny voalohany, ny tompon'andraikitra dia tsy liana amin'ny fandraisana fepetra hentitra amin'ny fampiharana manokana.
Saingy rehefa miparitaka ny olana dia toa manolo-tena amin'ny famahana ny olana manokana ireo andrim-panjakana tompon'andraikitra. Noho izany dia liana amin'ny fanohanana ny toeran'ny andrim-panjakana ofisialy ianao dia aza apetraka ny Apk.
Ity fampiharana android manokana ity dia navoaka tamin'ny taon-dasa izay mikendry ny vehivavy silamo. Na izany aza, ny manam-pahaizana dia milaza fa mahita ny sehatra manokana mitovy amin'ny Sulli App. Navoaka tamin'ny taon-dasa ary tompon'andraikitra tamin'ny fandefasana sarin'ireo vehivavy silamo malaza.
Fijoroan'ny Mpitarika Politika
Ny lehiben'ny mpanohitra ao India Rahul Gandi dia nandany mafy an'io fanambarana momba ny tsy fitandreman'ny governemanta sy ny tsy fisian'ny fahalianana io. Tezitra ny mpitarika ny NCP Nawab Malik nahita ny Vehivavy Silamo Vocal natao lavanty an-tserasera. Nitaky ny minisitry ny atitany handray fepetra haingana izy.
Mpitarika ara-politika malaza iray hafa Mehbooba Mufti dia miampanga mazava tsara ny governemanta ho nanome tanana malalaka amin'ny olana iray manokana. Na izy aza dia miampanga ny governemanta amin'ity hetsika fandripahana ity. Nomelohin’ny mpitarika ny asan-dahalo toy izany.
Hetsiky ny governemanta manoloana ny olana
Taorian'ny nahazoana fitarainana maro momba ny Bulli Bai Apk manokana. Nanambara ny minisitry ny IT Ashwini Vaishnaw fa hampahafantatra ny GitHub ny fanesorana votoaty. Efa nandray fepetra ny GitHub ary nanalavitra ny fampidinana ireo mpampiasa amin'ny vokatra.
Fanampin'izany, ny olona manana fampahalalana kely dia asaina manalavitra ny fametrahana rakitra fampiharana toy izany. Mifandray sy mifanakalo vaovao ny CERT sy ny manampahefana polisy. Mba hialana amin'ny olana hafa ary tsy hamela ny fihetseham-po hafa hanisy ratsy.
Ara-dalàna ve ny fametrahana ny Apk
Rehefa avy nanao fikarohana sy nikaroka votoaty an-tserasera azo tratrarina. Hitanay fotsiny fa tsy ara-dalàna ny Bulli Bai GitHub ary manoro hevitra ny mpampiasa finday hafa mba tsy hametraka ilay fampiharana. Manohana ny feminisma sy ny fiarovana ny vehivavy.
Mamaky lahatsoratra bilaogy mifandraika amin'ny lohahevitra samihafa ianao dia tsindrio ireto rohy manaraka ireto. izay Top 5 PUBG ESP Hacks ary Lalao aoLoop no nandrarana tany India.
Raha mino ianao fa ny sehatra toy izany dia aretin'andoha lehibe ho an'ny fiarahamonina olombelona. Indrindra ho an'ny vehivavy, ireo izay sahirana amin'ny fitadiavana ny zony tsara. Raha vonona ny hijery ireo olana ianao dia misintona Bulli Bai Apk an-tserasera.
Sokajy Blog Tags Bulli Bai Apk, Bulli Bai App, Bulli Bai App GitHub, Bulli Bai GitHub Post Fikarohana
Minecraft ModCombo Apk Download ho an'ny Android [lalao]